FAMARIHANA PRODUKTY Ny famoahana tariby lavaka mahitsy dia matetika miresaka momba ny famoahana tariby vy isan-karazany, ary koa ny famoahana ny fibres tarika. Ny sary maty rehetra dia misy lavaka eo afovoan'ny endrika, boribory, toradroa, octagonal na endrika manokana hafa. Rehefa voasintona tamin'ny alàlan'ny lavaka maty ny metaly dia nihena ny habeny ary niova endrika aza. Ny vy maty dia ampy hanaovana sary metaly malefaka toy ny volamena sy volafotsy. Ny maty dia mety hanana lavaka maro samy hafa habe. Maty be dia be ny sary tariby ...
Famaritana ny vokatra Mian die pin dia tsorakazo iray hanamorana ny ampahany hianjera amin'ny lasitra dia ampiasaina ny polishing mba hampihenana ny fahasarotana eo amin'ny faritra sy ny bobongolo. Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny tehina jacking mba handroahana ireo ampahany amin'ny lasitra, ary tsy maintsy hitazona ny fahasimban'ny faritra ho an'ny faritra visy. Izy io dia mety amin'ny ejecting faritra manana fitakiana marina sy ambonin'ny, faritra mitovy sy fanjaitra fanohanana, fisaka thimble, fantsona, sns, araka ny faritra samihafa amin'ny filàna choo ...
FANAMARIHANA PRODUKY Ny famonoana olona dia ampiasaina indrindra amin'ny fanapahana ny ampahany amin'ny sisiny. Ny famonoana ho faty dia mitazona ny visy na ny blot dia malefaka sy tsara tarehy amin'ny tarehy farany, izay mety amin'ny fivorian'ny manaraka. Vita amin'ny fitaovana HSS miaraka amin'ny PVD / CVD manarona. Ny famonoana antsika dia mety amin'ny karbaona sy vy vy. Izy io dia misy habe marobe ho an'ny M4 ka hatramin'ny M24 bolts. Fitaovana misy: M2, M35, M42. Afaka namokatra ny accroding ho an'ny fenitra na ny blot manao sary, ary afaka R&D ...
FAMARIHANA PRODUKY Punch pin dia mifototra amin'ny vy hafainganam-pandeha, vy hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, vy vita amin'ny tungsten ary bobongolo hafa, mifanaraka amin'ny fanodinana vy ny faritra bobongolo, ny lohataona mangatsiaka, ny fangatsiahana mangatsiaka, ny fitombenana, ny hydraulic, ny famolahana tsindrona ary ny indostrian'ny fanodinana hafa. Hexagon punch dia totohondry mahazatra ho an'ny voanjo. Novokarinay ny hexagon punch hatramin'ny M3 ka hatramin'ny M20. Raha manafatra ny pinch haxagon punch ianao dia mba ampahafantaro ahy ny savaivony, ny halavany, A (sakan'ny Hexagon), F (halalin'ny hexagon). Afaka mamokatra ny ...
MATY NY ROLLING THREAD
Ny famolavolana kodiarana maty dia famonoana ho an'ny masinina vita amin'ny volo, vita amin'ny akora HSS miaraka amin'ny fitsaboana carburizing, ampiasaina amin'ny famokarana kofehy. Ny kofehy mihodina maty voasarona visy drywall, visy chipboard, visy fandavahana tena, fantsom-paosy, visy hazo, visy masinina, visy fanaka, visy elektronika, visy fitambarana, blot, voanjo ary visy hafa. Afaka namokatra ny accroding ho an'ny fenitra na ny sary sokitra. Ary afaka R&D a ...
FAMARIHANA PRODUKY Ny totohondry faharoa dia famonoana ho an'ny milina lohan-tsambo. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana lohan-doha sy faritra amin'ny lavarangana. Anisan'izany ny JDW 250F, JDW 260F, JDW 270F, JDW 280F, JDW 290F, JDW 300F. Raha manafatra ny paompy faharoa an'ny volo an'ny Drywall ianao dia mba ampahafantaro ahy ny savaivony, ny halavany, ny M (PH ny sakany), ny Q (PH ny halaliny). Azontsika atao ny mamokatra ny accodeing punch faharoa amin'ny fenitra, ary afaka manao R&D accroding amin'ny sary, santionany ary ny fangatahan'ny mpanjifa. T ...
FAMARIHANA PRODUKY Carbide die dia maty mahazatra ho an'ny milina lohan-tsolika. Vita amin'ny akora tungsten misy tanjaka sy hamafisana, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny fitafiana ary fanoherana ny mari-pana avo lenta. Izy io dia ampiasaina hamokarana lohan-doha sy faritra amin'ny vatana. Antsoina koa hoe Tungsten maty . Vokatra Mian ny karbida maty: maty voalohany, totohondry voalohany, maty mpikapa, antsy fanapahana, tratra famelezana voalohany, tratra famonoana faharoa, ary karbida hafa maty. Ny karbida rehetra dia maty ho an'ny volo maina, rindrin-tsolika, visy fandavahana tena ...
FAMARIHANA PRODUKY Famonoana faharoa dia famonoana ho an'ny milina lohan-tsambo. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana lohan-doha sy faritra amin'ny alitara. Anisan'izany DIN7981 2.2, DIN7981 2.9, DIN7981 3.5, DIN7981 3.9, DIN7981 4.2, DIN7981 4.8, DIN7981 5.5, DIN7981 6.3. Raha manafatra ny teboka faharoa an'ny DIN7981 ianao, azafady mba ampahafantaro ahy ny savaivony, ny halavany, ny M (PH ny sakany), ny Q (PH ny halaliny), D (savaivon'ny loha), H (halalin'ny loha), R (radian-doha). Azontsika atao ny mamokatra ny teboka faharoa manamboatra ny fenitra, ...
FAMARIHANA PRODUKY Famonoana faharoa dia famonoana ho an'ny milina lohan-tsambo. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana lohan-doha sy lohan-drivotra. Azontsika atao ny mamokatra ny accodeing punch faharoa amin'ny fenitra, ary afaka manao R&D accroding amin'ny sary, santionany ary ny fangatahan'ny mpanjifa. Fenitra iraisam-pirenena ANSI American National Standards Institute JIS Janpanese indostrialy fenitra DIN Deutsch Industrial-Normen ISO International Standardination Organization BS British Standards GB ChinaNat ...
FAMARIHANA PRODUKY Famonoana faharoa dia famonoana ho an'ny milina lohan-tsambo. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana lohan-doha sy faritra amin'ny alitara. Anisan'izany ny AMF # 2, AMF # 3, AMF # 4, AMF # 5, AMF # 6, AMF # 7, AMF # 8, AMF # 10, AMF # 12. Raha manafatra ny totohondry faharoa an'ny AMF ianao dia mba ampahafantaro ahy ny savaivony, ny halavany, ny M (PH ny sakany), ny Q (PH ny halaliny). Azontsika atao ny mamokatra ny accodeing punch faharoa amin'ny fenitra, ary afaka manao R&D accroding amin'ny sary, santionany ary ny fangatahan'ny mpanjifa. INTERNATIO ...